मे 2010 – Pramb's Weblog
महिना: मे 2010
मे 30, 2010 by PRAMB
धेरै धेरै माया । हामी छुटेको झण्डै पाँच महिनापछि कसोकसो तिमीलाई एउटा पत्र लेख्न खोज्दै छु । धेरै दिनपछि इन्टरनेट बिगि्रएकामा रमाउँदै मैले समयको सदुपयोग गर्न र् याकबाट पढ्नबाकिँ किताब रोज्दा धुब्रचन्द्र गौतमको अलिखित हातमा पर् यो । त्यो किताबको पहिलो पृष्ठबाट म अघि बढ्न सकिन । किताब नराम्रो भएर पक्कै होइन । असाध्यै राम्रो भएर । किताबको पहिलो वाक्यदेखि पढ्दा नै तिमी मेरो आँखा वरिपरि नाँच्न थाल्यौ । मेरो मानसपटल भरी त्यही अध्यारो साँझ छरपष्ट भएर आए जुन साँझ हामी त्यो असजिलो गोरेटो बाटो मोबाइलको मधुरो प्रकाशको भरमा एकघन्टा हिँडिनै रह्यौँ ।
लक्ष्मी तिमीलाई पारिवारिक जिम्मेवारीले धेरै गाँजेको छ । त्यो बुझ्न सक्छु । त्यसैले क्याम्पसका परिक्षामा नम्बर ल्याउनुपर्ने पुस्तकहरु नै तिमीले पढ्न नभ्याइरहेकी बेला कुनै उपन्यास पढ्न सोचेकी होलिउ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर मेरो त प्राय सबै पल बरालिएरै बित्छ जस्तो कि इन्टरनेटमा अर्कोको चियोचर्चो गर्ने फेसबुक चलाएर गीत सुनेर फिलिम हेरेर अनि थोरै समय कलेज बाहेकका किताब पढेर । लक्ष्मी म आजकाल धेरै अङ्ग्रेजी फिलिम हेर्ने भएको छु । म अनुमान लगाउन सक्छु ती फिलिमहरुमा हुने यौन सम्बन्धका हिरोहिरोइनले ओठओठ जोडेर चुम्बन गरेको दृश्य हेर् यौं भने तिमी लाजले भुतुक्क हुन्छ्यौ । हामी सँगै बसेर ती फिलिमहरु हेर् यौँ भने तिमी लाजले भुतुक्क भएर भन्लिउ,’दिदी, यिनीहरु कसरी यस्तो फिलिम खेल्न सक्लान् यिनीहरुको बुवाआमाले केही भन्दैनन् पैसा नाम कमाइन्छ भन्दैमा जे पनि गर्न त हुँदैन नि’ सायद तिम्रा प्रतिकृया यस्तै होलान् । मसँग प्रत्यक्ष प्रतिकृया जनाउन नसकेपनि तिमीले मनभित्र भित्रै सायद यस्तै सोचौली ।
मलाई पनि यस्तै लाग्थ्यो पहिला पहिला अङ्ग्रेजी फिलिम हेर्दा । आजकाल थारै भएपनि म अभ्यस्त हुन थालेको छु । ती फिलिममा आफुलाई सरम लाग्ने त्यसता दृश्य भएपनि ती फिल्ममा देखाइने अन्य कुराबाट धेरै सिकिन्छ लक्ष्मी । विदेशीहरु हामी भन्दा कति धेरै माथि छन् भन्ने कुरा मनमा खेलिरहन्छ । तर ’emको बेफिकि्र खुल्लापनको संस्कृति चाहिँ तिमीलाई जस्तै मलाइ पनि मनपर्दैन ।
साँच्चै पुस्तकको कुरा गर्दागर्दै फिलिमतिर पो हेलिएछु । म तिमीलाई त्यही माथि चर्चा गरेको अलिखित उपन्यासको थोरै अंश सुनाउन चाहन्छु । ताकि ती पढ्दा मेरो मनमा तिम्रो स्मिृति आएजस्तै तिमीलाई पनि केही न केही सम्झनाले विगत अनुभुत गराउँछ । मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ लक्ष्मी तिमीहरु तीन त्यो अगेनाको वरिपरि बसेर खाना खाँदा मलाई सम्झन्छौ होला । ुके होला है ती दिदीको खबर अब त हामीलाई बिसर्न् पनि होला’ भनेर सोच्लाउ । इमान्दार बोल्छु लक्ष्मी मैले प्रत्येक पल प्रत्येक दिन नसम्झिउँला तर तिमीहरुसँगको छोटो भेटले मलाई समयसमयमा पुराना कुरा सोचेर एकोहोरो बनाइरहन्छ । त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘नोस्टाल्जिक’ भन्छन् । त्यसैले मलाई माफ गर म तिमीलाई पनि उपन्यासका यी हरफ सुनाएर नोस्टाल्जिक बनाउन खोज्दै छु ।
कुकुरहरुको सामुहिक भुकाइ निकै टाढा भए पनि सुनिन थालेकाले हामीले थाहा पायौं गाउँ नजिकै कतै छ । साँझको लाटो झमक्कपना र एकलासले बाटो दुबै हामीलाई अझै थकाउन पर्याप्त थिए ।
मान्छे यस्तोमा असहाय पाउन सक्छ आफूलाई । नहिँडी नहुने बाटो निर्लज्ज र क्रुर भएर कोसौँसम्म पल्टेको देखिन्थ्यो । यता हाम्रो उदासी र साँझको रङमा निकै एकाकारपन फेला परेको थियो ।
-‘यसपल्ट त पक्कै गाउँ नै हो ।’ तिलकले अठोटसाथ भन्यो । अलिक प्रसन्नता अनुहारमा पुर् याएको हुँदो हो । अँध्यारोमा देखिएन ।
‘यस्तो पनि हिँडाइ हुन्छ मान्छेको जुन ठाउँ पनि देखिनलाई उस्तै देखिन्छ आफ्नो गाउँचाहिँ कता हो कता ‘
हो यति हरफ पढिसक्दा नै हो मेरो मन तिम्रो कल्पनातिर डोरिएको । पुस्तकमा यसभन्दा तल बाँकि रहेका दुइ साना हरफ त पढेँ मैले तर आँखाले मात्रै । दिमाग तिमी तिरै थियो ।
त्यो मेरो तराइमा दोस्रो हिँडाइ भएपनि दिनभर त्यहाँको सम्म फाँट हिँडिरहँदा मलाई लागेको थियो यहाँ हिँड्दा त जमिन गन्तब्यबिहीन भइदिँदो रहेछ । जति बेगमा हिँडेर जहाँ पुग्छु भने पनि क्षितिज पर खेतै खेत पछि आकाशमा टुंगिएको देखिन्छ । तराइको दाँजोमा बरु पहाडका उकालि ओरालीको ज्ञान अलिअलि भएकोले त्यहाँ हिँड्दा शरिर थाके पनि मन चंगा हुन्थ्यो । तर यहाँ त यो स्वार्थी मनले सायद जति हिँड्दा पनि कहीँ नपुगे जस्तो भएपछि दिक्दारीले छोयौ । मैले सोचेँ यस्तो ठाउँमा अझै तीन हप्ता मैले कसरी बिताउने ?
दिनभर पशुपतिनगरकी मिनासँग दुइवटा गाविस पुरै हिँड्दा पनि कुनै उत्साह आएन । दिक्क मानेको बेला स्कुलदेखिको आफ्नो प्रेम कसरी विवाहमा परिणत भयो भन्ने ’bout चाहिँ मैले रमाएर सुनेको थिएँ । पुषको छोटो दिनमा साँझ पर्न कति नै बेर लाग्थ्यो र । अनपेक्षित रुपमा तिमी त्यो साँझमा भेटियौ । त्यो रातका लागि म तिम्रो जिम्मा लगाइएँ । मलाई आफू उभिएको धर्ती चितवन जिल्लाको माडी क्षेत्र हो भन्ने सम्म थाहा थियो । बाकिँ सबै तिम्रै भर । म तिम्रो घरमा त्यो रातको बासका लागि लगिँदैरहेछु मलाइ त्यो पनि थाहा थिएन ।
पुसको अँध्यारो रातमा मैले तिम्रो अनुहार पनि खुट्याउन सकेको थिइनँ । तिमी कस्ती उमेर कहाँ बस्ने के गर्ने होलिउ भन्ने उकुसमुकुस मनमा छँदै थियो । एकघन्टाको त्यो कच्चीबाटोमा सार्बजनिक यातायातमा गुडेपछि हामीले काँडाघारीको गोरेटो बाटो रोज्दा त्यस्तै साँझको ८ जति बजेको हुँदो हो…………॥क्रमश
मे 19, 2010 by PRAMB
उसले मलाई हेरिरह्यो मात्रै
वश चेतना शुन्य प्राणी झै
उ मेरो मर्म बुझ्न सक्छ
तर भाषा सक्दैन
मर्मले केही फर्काउन खोज्छ
तर प्रेमको भाषाले दिँदैन
त्यो तिमीले र मैले मात्रै
बुझ्न सक्ने प्रमको भाषा
Posted in Poem	|3टिप्पणीहरु
मे 18, 2010 by PRAMB
Look back with Longing eyes
and know that I will follow you
Lift me up in your love
asalight wind liftsaswallow,
Let out flight be far
in sun or blowing rain
But what if I heard my first love
calling me again?
मे 9, 2010 by PRAMB
भ्रम त्याग, आउ
होइन उत्तर !
नयनाले बडो उत्साहित भएर भनी ‘म सत्यमा आधारित स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न चाहन्छु ।’ यो सुनेर म चुपचार भएँ । नयनाले आश्चर्य मिसिएको स्वरममा सोधी, ‘जवाफ दिनु भएन नि सुन्नु भएन म सत्यमा आधारित स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न चाहन्छु’ यसपटक उत्तर दिन बाध्य भएँ ‘त्यसो भए तिमी पत्रकारिता नगर ।’ अवाक् भइन् नयना । दुखका धसा्रहरु मुहारमा प्रस्टै देखिए । मैले एउटा लामो सास ताने र बताउन थाले ।
नयना ‘सत्य’ जसलाई अंग्रेजीमा ‘ट्रुथ’ भनिन्छ । त्यो शब्द त्यति सानो शब्द होइन । नेपालको त कुरै छाडौं पत्रकारिताको विश्व इतिहासमै यस्ता पत्रकारहरु बिरर्ल आए जसले सत्यलार्य सम्बोधन गरे । पत्रकारिता ‘सत्य’ होइन ‘तथ्य’ सँग सम्बन्धित विधा हो । सत्य र तथ्य एउटै कुरा होइनन् । सत्यभित्र तथ्य सजिलै अटाउँछ तर सत्यभित्र तथ्यबाहेर अरु पनि धेरै थोक हुन्छ । हरेक सत्य भित्र तथ्य हुन्छ तर हरेक तथ्य भित्र सत्य नहुन पनि सक्छ ।
तथ्यलाई विभिन्न कोणबाट प्रस्तुन गर्न सकिन्छ पहिलो पेजभित्र भित्री पेज जहाँ पनि जसरी पनि राख्न सकिन्छ रंग हल्का गर्न सकिन्छ गाढा बनाउन सकिन्छ…॥आदि आदि । तर सत्यमा यो कुनै पनि थोक सम्भव हुँदैन । सत्य केबल सत्य हुन्छ । ए थिङ अफ ब्युटी ज्याय फर एभर । सत्यं शिवं सुन्दरम् । त्यस कारणले नयना पहिलो कुरा यस भ्रमबाट मुक्त होउ कि पत्रत्रकारिता सत्यमा आधारित हुन्छ । तथ्यसँग सम्बन्धित विधा हो यो व्यवसाय हो यो वा मिसन हो यो ।
पदम ठकुरीले मलार्य पत्रकारितामा ल्याउँदा हामीले गर्ने अखबारको नाम त आफूलाई थाहा थियो तर पत्रकारिताको टाइप थाहा पाउन मलाई समय लाग्यो । मलाई मात्र किन आज पनि पत्रकारिताको ज्वरोमा यता उता भौँतारिरहेको कुनै पनि नवप्रवेशीलार्य यो कुराको आत्मबोध हुन केही समय लाग्छ कतिपय त थाहै नपाई रिटायर्ड हुन्छन् वा बीचैमा छाड्छन् । कि उनीहरुलार्य गरिरहेको पत्रकारिता कस्तो टाइपको हो र कसका लागि हो तर आजको युवा पुूस्ता हाम्रोभन्दा बढ्ता योग्य भएको उससलाई यो आत्मबोध हुन लाग्ने समय थोरै छ । पत्रकारिताका विभिन्न टाइप र प्रकार छन् । सरकारी पत्रकारिता व्यवसायिक पत्रकारिता मिसन पत्रकारिता आदि आदि । कोही यसमा चुर्लम्म डुबेको छन् पत्रकारिताको नशा र आनन्दको मजाले ओतप्रोत भएर पत्रकारितामा छन् । र कतिपय नाम तपाइँ प्राय छापामा देख्नु हुन्छ वा टिभीमा देख्नु हुन्छ पत्रकारिता उनीहरुका निम्ति पार्टटाइम खेल हो । पत्रकारिता गरेको अभिनय गर्ने खेल । पत्रकार मात्र किन कतिपय सानाठूला सरकारी वा गैरसरकारी साचारमाधयमका मालिकहरुका निम्ति पनि यही कुरा भन्न सकिन्छ । तर यो कुरा नेपालमा मात्र सीमित छैन । संसारभरि तेस्रो विश्वका धेरै देशमा लगभग यही कुरा लागू हुन्छ ।
हाम्रो पुस्ता पत्रकारितामा प्रवेश गर्दा मिसन पत्रकारिताको बोलवाला थियो २०४६ पछि स्थिति केही बदलिएको छ । तर त्यति होइन जति प्रचार गरिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि पत्रकारितामा गुणात्मक विकास भएको छ भन्न कसैले संकोच नमाने हुन्छ ।
नयना म कुरा गर्दै थिएँ सत्यको । पत्रकारिता बढी भए तथ्यसँग सम्बिन्धत विषय हो सत्य होइन भन्ने कुरा अघि नै भए । अब तिमी दोस्रो भ्रमबाट मुक्त हुने तयारी गर । निष्पक्ष पत्रकरिताको भ्रम । पत्रकारितामा सबैभन्दा दुरुपयोग भएको शब्द हो निष्पक्षता । मलाई लाग्छ पूर्ण निष्पक्षता गणित या निर्वाणमा मात्र सम्भव छ । सिके लाल भन्दै थिए गणितमा पनि सम्भव छैन निर्वाणमा मात्र त्यो सम्भव छ । निष्पक्षता कुनै लड्डु वा सामान होइन जसलार्य जोखेर वा काटेर दामाशाहीको दरले प्रत्येक पक्षलाई बाँड्न सकियोस् । पत्रकारिताको निष्पक्षता कुनै निरपेक्ष आदर्श होइन । न्याय र अन्यायबीच कुरा चल्दा कालो र सेतोबीच विवाद उठ्दा निर्णय गर्न नसक्नु निष्पक्षता होइन । सकेसम्म धॆरै तथ्यहरुको र सकेसम्म धेरै पक्षहरुको नजिक गएर विवेकलाई साक्षी राखेर मात्र हामी सार्थक पत्रकारिताको नजिक पुग्न सक्छौंँ । निष्पक्षता पत्रकारिता पत्रकारिताका केही मास्टरहरुले कक्षामा पढाएझैँ कुनै ठोस लक्ष्य होइन जहाँ पुगेर कसैले यो दाबा गर्न सकोस् कि मैले निष्पक्षताको शिखरमा टेकेँ वा फलानो साचारमाध्यमले टेक्यो । आहा क्या ठाउँ रहेछ यो ।
नयना पत्रकारिता गर । तर भ्रममुक्त भएर गर । यसलाई यसको वास्तविक स्वरुपमा जानेर पत्रकारिता गर्यौ भने पाठक दर्शक वा श्रोताको पनि बढी सेवा हुनेछ साथै आफ्नो करियार पनि सुगम हुनेछ । कुनै दिन भ्म टुट्दा दुख पनि हुनेछैन ।
मिसन पत्रकारिता र व्यवसायिक पत्रकारिताका विषयमा तिम्रो जिज्ञासाका विषयमा दुई शब्द भन्न चाहन्छु । यी दुवै आ आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्व राख्छन् । हालको हाम्रो जस्तो समाज जहाँ व्यापार पत्रकारिता र राजनीति यति अप्ठ्यारोसँग जेलिएका छन् । एउटाले अर्कोप्रति कुनै सुपेरिटि वा इनफेरिटीको भ्रम नपाले हुन्छ ।
जे गर्दा अन्तरमनको आनन्द प्राप्त हुन्छ । जे गर्दा आफ्नो विवेकले आफूलाई दोषी ठहर्यायाउँदैन जे गर्दा सडकदेखि महलसम्म शिर उचो गरेर हिँड्ने आत्मसम्मान प्राप्त हुन्छ त्यही पत्रकारिता गरे हुन्छ । चाहे मिसन पत्रकारिता होस् वा व्यवसायिक पत्रकारिता होस् विधाको रुपमा भनौं या पेसाको रुपमा पत्रकारिता एउटा जबरजस्त काम हो । र पत्रकारिताले आफ्ना साधकहरुलाई संसारका अनेकौं रंगका विविधताहरुको बीच बाँच्ने मौका दिन्छ । एउटै जीवन बाँचेर पनि पत्रकारितामा लाग्नेहरु धेरै जीवन बाँचेका हुन्छन् । यही यसको सुख हो र यही कुरा पत्रकारितामा लाग्नेहरुको निम्ति दुखको कारक बन्छ । पत्रकारितामा मात्र किनरु कुनै पनि बस्तु वा मान्छे कुनै एक दिन दुखको कारण पनि बन्छ । एउटै जीवन बाँचेर धेरै धेरै जीवन महसुस गर्न पाउने पेसामा स्वागत छ नयना । वेलकम टु जर्नालिजम ।
P.S-पत्रकार विजयकुमार पाण्डेको यो लेख कुनै बेला ‘समय’ साप्ताहिकमा छापिएको थियो । पत्रकरिता पढ्न सुरु गर्दा पढेको यो लेख आज पत्रकारिताको अभ्यासमा लाग्दा फेरी सान्तर्भिक लागेको छ । विजयकुमारको ’boutमा मलाई थाहा भएको केही रोचक कुरा लेख्न बाकिँ छ उपयुक्त शब्द र समय पाएपछि यही व्लगमा लेख्छु
Posted in monologue	|2टिप्पणीहरु